"Bamele Ukukhathalela Impilo Yakhe" IWarren | boxen247.com
"Bamele ukuba baKhathalele iMpilo yakhe" (uDillian Whyte) - UFrank Warren Uyathetha
Ndiyamangaliswa kukuba bethetha ngokuzama ukuyifumana ngoNovemba. Ngokukhawuleza xa ukhutshiwe, iBhodi yeBhokisi yoLawulo yeBhokisi yaseBritane inika ubuncinci bokumiswa kwezonyango iintsuku ezingama-28/30 ngaphambi kokuba uphinde ubuyele kwindawo yokuzivocavoca kwaye uphinde uqalise ukusasaza. Kodwa xa ufike unkqonkqozo olubi, kwaye ibingumnkqonkqozo ombi, ngamanye amaxesha bongeza loo nto mhlawumbi kwiintsuku ezingama-45, ” UWarren uxelele i-Talk Sport.
“Ukutsho ukuba bayawubuyisela umlo kwakhona ngo-Novemba kuphambene. Nabani na ojikeleze uDillian Whyte, kwaye ndiqinisekile ukuba uDillian angalwa naye ngomso, kodwa nabani na omngqongileyo kufuneka amkhusele kwaye aqinisekise ukuba ayenzeki. Anditsho kuba ndicinga, 'Owu, ukuba uyabetha uPovetkin sibuyele kwakule meko inye ngaphambili [kunye nokuzikhusela okunyanzelekileyo],' kuba asikho njalo.
“I-WBC ithe uPovetkin uneenyanga ezilishumi elinambini ezantsi kwendlela phambi kokuba uTyson enze eso sinyanzelo sokhuselo. Kwaye nokuba uDillian Whyte angambetha, ibizakuba yindawo enye kwakhona, kuya kuba ziinyanga ezilishumi elinambini ezantsi kwendlela. Yiyo loo nto ndisitsho. Nditsho ukuba kufuneka bayikhathalele impilo yakhe. ”
I-Esquiva Falcao kunye neRobson Conceicao Hlala ungabethwa (eSao Paulo / eBrazil)	"Ngendenze okufanayo, mhlawumbi nangokuKhawuleza" uJoe Joyce kwi-Dubois KO